The Branded Shopaholic - Quality & Authentic, Phra Khanong, Bangkok (2022)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > บริษัท โฆษณาและการตลาด > The Branded Shopaholic - Quality & Authentic
KruTukky : การตลาดออนไลน์ง่ายนิดเด
8/3 Soi Rungsijaroj, Bang Chak, Phra Khanong
ร้านขายผ้า ไทยสวัสดิ์ เมตร ห
1098 ซอย สุขุมวิท 71/1 เขตวัฒนา แขวง พระโขนงเหนือ
ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Guy Laroche တံဆိပ်စစ်စစ်တွေကို သီးသန့်ရောင်းချပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက The Branded Shopaholic - Quality & Authentic အတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ လိုဂိုပါ (၃)လွှာ ချည်သားနှာခေါင်းစည်းလေးတွေကို တာဝန်ယူ ချုပ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်ပြည်စိုးစက်ရုံ နဲ့ အခုလို အမြဲလက်တွဲလုပ်ကိုင်တဲ့ The Branded Shopaholic လုပ်ငန်းကြီးလည်း ဆထက်တပိုး တိုးပွားအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 🙏🏻
မြန်ပြည်စိုးအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာ ရနိုင်တာတွေကတော့...ထီး၊ ဦးထုပ်၊ မိုးကာ၊ T-shirt၊ နှာခေါင်းစည်း၊ Polo shirt စတဲ့ပစ္စည်းဒီဇိုင်းမျိုးစုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးနဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေမှာမလို့ စိတ်ချလက်ချ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ မှာယူ အားပေးနိုင်ပါတယ်။
MYAN PYI SOE GARMENT
One-stop Garment Manufacturing & Apparel Solutions
📞 09 971 808 477
🏠 No.၁၀၅၊ တိုက် B၊ အင်း၀အိမ်ရာ၊
မြိတ်လမ်း၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
#MPSG #myanpyisoegarment #facemasks #tshirt #logo #printing
100% Authentic and Genuine “ Guy Laroche (Paris)” products with reasonable and right prices are all in here !!!
🎉🎊 Suprise BD Gift 🎉🎊
👇အခု screenshot ထဲက account ပိုင်ရှင်
ကိုရဲ‌လေးအတွက် ချစ်သူလေးက မင်မင်တို့ဆီကနေ ဒီ Guy Laroche (Paris) short wallet မိုက်မိုက်လေးကို suprise gift မှာသွားပါတယ်။
message လေးတစ်စောင်လည်းပါပါတယ် 😍
"Happy birthday my love 💕🎂🎂
Be happy and healthy😘"
ကိုအောင်ကိုဇော် အတွက် မင်မင်တို့ဆီကနေ ဒီ Guy Laroche (Paris) Man Belt မိုက်မိုက်လေးကို suprise gift မှာသွားပါတယ်။
"Happy Birthday to my lovely boy 👦
မွေးနေ့ကစပြီးစိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး မှန်ကန်သောလိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပါစေ🧡
မပြောင်းလဲသောအချစ်၊ မပြောင်းလဲသောသည်းခံမှု၊ မပြောင်းလဲသောဂရုစိုက်ခြင်းများနဲ့ ချစ်ဆုံးအပေါ် အမြဲချစ်ပေးနိုင်ပါစေ😘
Wish you all the bests ❣️
ကိုကျော်ထွန်းလင်း အတွက် မင်မင်တို့ဆီကနေ ဒီ Guy Laroche (Paris) short wallet မိုက်မိုက်လေးကို suprise gift မှာသွားပါတယ်။
" မနက်ဖြန်ကျရောက်မည့် မွေးနေ့မှစ၍ ကိုကျော့် ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ တစ်ထပ်တည်းကျပြီး တစ်နှစ်ထပ် တစ်နှစ် ပိုပို ပြီး နု ချော ခန့် ချစ်ဖို့ကောင်း ပါစေ"
🎉🎊 Suprise Gift 🎉🎊
ကိုအောင်သူဟိန်း အတွက် ချစ်သူလေး Avon မှ
မင်မင်တို့ဆီကနေ ဒီ Guy Laroche (Paris)
short wallet မိုက်မိုက်လေးကို suprise gift မှာသွားပါတယ်။
" Von မူးပီးရစ်သမျှ သီးခံပေးလို့ လက်ဆောင်ပေးတာပါနော် ..အများကြီး ချစ်ပါတယ် ❤️ "
ကိုကျော်စိုးထိုက် အတွက် ချစ်သူလေး ဂျူးဂျူးမှ
" ကို့အတွကိ ဝယ်ရမယ် ဆိုအမြဲ နှမြောပြိး ဂျူးအတွကိပဲ အမြဲစဉ်းစားပေးပြိး ချစ်ပေးလို့ လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာပါ။ အရမ်းလဲ ချစိပါတယ် ❤️ "
❤️❤️ စေတနာထားပြီး အတွေ့အကြုံရေးသားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ❤️
✅ မင်မင်တို့သည် Official showroom quality သာရောင်းပါသည်။
company ပါကင်လာတာကို လုံးဝဖွင့်တောင်မကြည့်ပဲ customer လက်ထဲအရောက်ပေးပါတယ်။
✅ငွေလည်းတစ်ပြားမှကြိုမယူပဲ 100% တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူဖြင့်အပြည့်နဲ့ရောင်းချပါတယ်။
customer သည် စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးပြီး ကျေနပ်မှယူခွင့်ရှိပါသည်။ ( exception: yangon နဲ့ မန္တလေးက cash on delivery ဖြစ်ပြီး အခြားနယ်မြို့များအားလုံးက ကြိုတင်ပေးချေ prepaid ဖြစ်ပါတယ် )
🛑" စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံပေးပါရန် "🛑 လို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရေးသားထားပြီးမှ လက်ခံခိုင်းပါတယ်။သွားပို့တာဖြစ်ဖြစ် ရုံးမှာကိုယ်တိုင်လာယူတာဖြစ်ဖြစ် customer က စစ်ဆေးချိန်မှာ Quality or တခြား error ဖြစ်ဖြစ် In case တွေ့ခဲ့သည်ရှိသော် မကြိုက်ရင် on the spot ငြင်းခွင့်ရှိပါသည် တခါမှလည်း ဒီလိုပြသနာမဖြစ်ဖူးပါဘူးနော်။ customer ကို အတင်းထိုးပေးတာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးပါဘူး ... ။
✅customer မှာ 100% လွတ်လပ်မှုရှိပါသည်။ မင်မင်တို့ 100% full responsibility အပြည့်ယူပါသည်။
customer ကို ဘယ်အရာနဲ့မှချုပ်မထားပါဘူး
✅မင်မင်တို့က ရုံးချုပ်တိုက်ရိုက် company ပါကင်အလုံးတြွေဖစ်ကြောင်း 100%
အာမခံပြီး H & K Zenith Co., Ltd အနေနဲ့ တင်သွင်းကာ customer တိုင်းကို စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးခွင့်ပေးပြီး instock ရောင်းပါသည်။
✅ မင်မင်တို့ဟာ Guy Laroche (Paris) brand သီးသန့်ကို တရားဝင်တင်သွင်းရောင်းချလာသည်မှာ ၄ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ...
မင်မင်တို့ရဲ့ Always first priority ဟာ Customers ပဲဖြစ်ပါတယ်။
🇨🇵 ပြင်သစ် 𝐆𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 (𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬)'𝐬 𝗠𝗘𝗡 𝗕𝗮𝗴𝘀
🔥🔥 𝐒𝐀𝐋𝐄 🔥𝐒𝐀𝐋𝐄 🔥😱🎉🎁
✅#Instock ! အားလုံး Instock မို့ စောင့်ဆိုင်းဖို့မလိုပါဘူး။
✅ အလှဆုံး နောက်ဆုံးပေါ် Latest Model အမြင့်ဆုံးတွေကိုပဲရွေးချယ်ရောင်းချပါသည်။
✅100% AUTHENTIC & Authorized Dealer 🔰
🔰 Waiting Time: Order စ confirm တဲ့ရက်မှ 2~3 ရက်အတွင်းလက်ထဲအရောက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ we promise.
ကိုယ်တိုင်လာဝယ်လို့လည်းရပါတယ် (4~5မျိုးအထိ
✅ mobile banking ဖြင့်ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်။
Please read below 👇👇
✅100% AUTHENTIC & BRAND NEW 🔰
❌ပစ္စည်းအတု လုံးဝလုံးဝမရောင်းပါ။❌ ဘယ်သောအခါမှလည်းမရောင်းခဲ့ပါ… page ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ခဏမျှလေ့လာပြီးမှသာ this kindda questions related ကို မေးသင့် မမေးသင့် ကျေးဇူးပြုပြီး စဉ်းစားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေနော်…
✅ Company တိုက်ရိုက် တရားဝင် Official Dealer ဖြစ်ပါသည်။
✅ Page သက်တမ်း ၄နှစ်ခန့်မျှရှိပြီဖြစ်ပြီး Customer ထောင်ဂဏန်းများစွာရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တာကြောင့် မည်သို့သောသံသယမှရှိရန်မလိုကြောင်း 100% အာမခံချက်အပြည့်| တာဝန်ယူမှုအပြည့်ဖြင့်ရောင်းချပါသည်။
✅ Yangon & Mandalay အတွက် ငွေကြိုလွှဲဖို့မလိုပါဘူး ပစ္စည်းလာပို့ချိန် mobile banking ဖြင့်ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်။… သို့သော် Order Confirm အတိအကျလုပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်…အခြားနယ်မြို့များအနေနဲ့ Full Amount & Delivery 2000 Ks to ကားဂိတ် (အောင်ဆန်းကွင်း) ပေးချေဖို့လိုပါမယ်။
💢 Sale Time 🕗 မကုန်သေးခင်အထိသာရနိုင်ပါမယ်။
ဘယ်လောက်အကုန်မြန်သလဲဆိုတာ old customer များအားလုံးသိကြတာမို့ 😁 ဒါကြောင့် ရတုန်းလေးမှာ ဆွဲထားဖို့လိုပါကြောင်း
နောက်ထပ် GL SALE ပစ္စည်းတွေရှိပါသေးတယ်…
wallet အတိုနှင့်အရှည်များ| ခါးပတ်များ | set လိုက်ဘူးကြီး box များ၊ အမျိုးသမီး Handbags များနှင့် ကျားဘေးလွယ်အကြီးနှင့်အငယ်များလည်း SALE ရှိမှာဖြစ်လို့ Page ကို Like & See First လေးလုပ်ထားပေးပါအုံးနော် …
🌈ဝယ်ဖူးကြသူများကတော့ သိကြပြီးသားပါ…. ဤ page မှCompany တိုက်ရိုက်ဈေးဖြင့်ရောင်းပြီးသမျှပစ္စည်းများအားလုံးဟာ Feedback ကောင်း| review ကောင်းများဖြင့် ယခုထိတိုင်ရပ်တည်နေတဲ့| အာမခံချက်အပြည့်တာဝန်ယူမှုအပြည့်ပေးထားတဲ့ Brands ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ 🔊 🎉🎉🎉
💖ဝယ်ယူအားပေးကြသော ချစ်သော Customer များတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို စိတ်ရင်းဖြင့်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…💖
💘We do love all of our dear customers !!! 💘
🌳 THE BRANDED SHOPERHOIC 🌳
🌿Thailand Bangkok Based 🌿
#GuyLarocheMyanmar #GuyLarochOnline #giftsetbox #giftbox #shortwallets #longwallets #clutch #belt #ladybags #brand #GuyLaroche
🇨🇵 ပြင်သစ် 𝐆𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 (𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬)'𝐬 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗪𝗮𝗹𝗹𝗲𝘁𝘀
🔥🔥𝐒𝐀𝐋𝐄 🔥 𝐒𝐀𝐋𝐄 🔥𝐒𝐀𝐋𝐄 🔥😱🎁
🇨🇵 ပြင်သစ် 𝐆𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 (𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬)'𝐬 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗘𝗡
🇨🇵 ပြင်သစ် 𝐆𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 (𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬)'𝐬 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁 𝗪𝗮𝗹𝗹𝗲𝘁𝘀
🇨🇵 ပြင်သစ် 𝐆𝐮𝐲 𝐋𝐚𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 (𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬)'𝐬 𝙇𝙖𝙙𝙮 𝘽𝙖𝙜𝙨
100% Authentic and Genuine “ Guy Laroche (Paris)” products with reasonable and right prices are all here !!!
Guy Laroche (Paris)'s fashion products, wallets (short & long), belts (men), handbags, men bags